Contact Us | Myanmar Online Advertising and Affiliate marketing network
Myanmar Online Advertising & Affiliate Network
To requestafree consultation session or to discuss any of your individual requirements, please fill out the form below andamember of the team will contact you within eight hours.
NetScriper Co., Ltd (MM)
Myanmar ICT Park,
01 230 5191
NetScriper Ltd (UK)
0208 150 6997
0843 713 0173*
*5p per minute from the UK BT landline.
One or more required fields were left blank. Please fill them in and try again.
Afghanistan Albania Algeria Andorra Angola Anguilla Ant & Barbuda Antigua Antilles Argentina Armenia Aruba Ascension Australia Austria Azores Bahamas Bahrain Balearic Is. Bangladesh Barbados Belgium Belize Benin Bermuda BFPO Bhutan Bolivia Bosnia Herzegovina Botswana Brazil British Virgin Islands Brunei Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambodia Cameroon Canada Canary Islands Cape Verde Caroline Is. Cayman Islands Cen. African Rep. Chad Chile China Christmas Island Cocos Colombia Comoros Cook Island Corsica Costa Rica Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Djibouti Dominica Dominican Republic East Timor Ecuador Egypt Eire El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Ethiopia Falkland Is. Faroe Islands Fiji Finland Fr. Antartic Ter Fr. Guyana Fr. West Indies France French Guiana French Polynesia Gabon Gambia Gaza & Khan Yunis Germany Ghana Gibraltar Greece Greenland Grenada Guadeloupe Guam Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Hawaii Honduras Hong Kong Hungary Iceland India Indonesia Iran Iraq Ireland Israel Italy Jamaica Japan Jordan Kazakhstan Keeling Is-Cocos Kenya Kirabati Kiribati Korea Korea (Rep Of) Kuwait Laos Latvia Lebanon Lesotho Liberia Libya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macao Macedonia Madagascar Madeira Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Marianas Islands Marshall Is. Martinique Mauritania Mauritius Mexico Monaco Mongolia Montserrat Morocco Mozambique Myanmar Namibia Nauru Is. Nepal Neth. Antilles Netherlands New Caledonia New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Norfolk Is. North Korea Norway Oman Pakistan Panama Papua N.G. Paraguay Peru Philippines Pitcairn Island Poland Portugal Puerto Rico Qatar Reunion Romania Russia Rwanda Samoa San Marino Sao Tome & Principe Saudi Arabia Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Solomon Islands Somalia South Africa South Korea Spain Spanish (N. Afr.) Spitzbergen Sri Lanka St Helena St Kitts & Nevis St Lucia St P. & Miquelon St Pierre St Vincent Sudan Suriname Swaziland Sweden Switzerland Tahiti Taiwan Tanzania Thailand Tibet Tobago Togo Tonga Trinidad Tristan Da Cunha Tunisia Turkey Turks & Caicos Is Tuvalu Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom United States Uruguay US Virgin Is. Vanuatu Vatican City Venezuela Vietnam Virgin Is. Wake Island Wal. & Futuna Is. West Indies Western Samoa Yemen Yugoslavia Zaire Zambia Zimbabwe
Advertiser Publisher Agency
CPC (Cost Per Click) ဆိုတာဘာလဲ
CPC (Cost Per Click) (ခေါ်) PPC (Pay Per Click) ဆိုတာ ကြာ်ငြာထည့်သွင်းသူ (advertiser) များက website ပိုင်ရှင် (publisher) များသို့ ကြော်ငြာတွင် click တစ်ချက်နှိပ်တိုင်း (per-click) ကြော်ငြာခ ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
ကြော်ငြာထည့်သွင်းသူများက ကြော်ငြာအမျိုးအစား (Ad Category) ကို ရွေးချယ်ပြီး ကြော်ငြာပုံစံ (Ad Format) အစရှိသော Banner, Skyscraper, MPU များကို ရွေးချယ်က AdInnwa system ထဲတွင် ကြော်ငြာ ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။ ကြော်ငြာထည့်သွင်းသူမှ သတ်မှတ်ထားသော Bit Rate (pre-click နှုန်းထား) နှင့် Daily Budget (နေ့ စဉ်အသုံးပြုငွေ) ပေါ်မူတည်၍ AdInnwa system မှ မည်သည့် websiteတွင် အကြိမ်မည်မျှ ပေါ်မည်ကို တွက်ချက်၍ အလိုအလျှောက် ကြော်ငြာထည့်သွင်း သွားပါမည်။
Website တည်ထောင်သူများက မိမိတို့ website နှင့် သင့်လျော်သော ကြော်ငြာပုံစံ (Ad Format) ကိုရွေးချယ်ပြီး AdInnwa system မှ generate လုပ်ကာ ရရှိလာသော code weight ကို သင့်လျှော်ရာ coding ပိုင်းတွင်ထည့်သွင်းရုံဖြင့် site ပေါ်တွင် အလိုအလျှောက် ကြော်ငြာပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ထိုကြော်ငြာများကို website user များ click နှိပ်ပါက Ad impression ပေါ်မူတည်၍ ကြော်ငြာခ ရပါမည်။
CPA (Cost Per Action) ဆိုတာဘာလဲ
CPA (Cost Per Action) (ခေါ်) PPS (Pay Per Sale) (ခေါ်) CPS (Cost Per Sale) ဆိုတာ ကြော်ငြာထည့်သွင်းသူ (advertiser) များက website တည်ထောင်သူ (publisher) များသို့ ကြော်ငြာများမှ တစ်ဆင့် user များက action တစ်ခုပြုလုပ်တိုင်း (per-action) တွင် အကျိုးအမြတ် commission ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ထို action များမှာ user များ e-commerce site များတွင် ဈေးဝယ်ခြင်း၊ member register ပြုလုပ်ခြင်း၊ newsletter signup ပြုလုပ်ခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Site တည်ထောင်သူများမှာ ကြော်ငြာထည့်သွင်းရုံ၊ ထိုကြော်ငြာများသို့ user များ click နှိပ်ရုံဖြင့် ပိုက်ဆံရမည် မဟုတ်ပါ။ ထိုကြော်ငြာများမှ တစ်ဆင့် ကြော်ငြာထည့်သွင်းသူ လုပ်စေချင်သော action တစ်ခုကို user များလုပ်မှသာ site တည်ထောင်သူ အနေဖြင့် အကျိုးအမြတ်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဤ Ad model တွင် ကြော်ငြာထည့်သွင်းသူ (advertiser) အား Merchant ဟုခေါ်ဆိုနိုင်ပြီး website တည်ထောင်သူ (publisher) အား Affiliate ဟုခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ ဤ Ad model အား Performance-based Marketing ဖြစ်သော Affiliate Marketing ဟုလည်း ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။
ကြော်ငြာထည့်သွင်းသူများက CPC ကဲ့သို့ ကြော်ငြာအမျိုးအစား၊ ကြော်ငြာပုံစံများ ရွေးချယ်ပြီးလျှင် Commission ကို Percentage ( သို့ ) Fixed commission rate သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
Website တည်ထောင်သူများက မည်သည့် CPA program ထည့်သွင်းမည်ကို ရွေးချယ်ပြီး join ရန်လိုအပ်သည်။ CPA ကြော်ငြာများသည် CPC ကဲ့သို့ အလိုအလျှောက် site ပေါ်တွင် ပေါ်လာမည်မဟုတ်ပါ။
Website တည်ထောင်သူမှ CPA တစ်ခုကို join ပြီဆိုလျှင် ထို CPA ပိုင်ရှင်ဖြစ်သော ကြော်ငြာထည့်သွင်းသူမှ လက်ခံရန်လိုအပ်သည်။ ကြော်ငြာထည့်သွင်းသူ လက်ခံမှသာ ထို CPA ကြော်ငြာသည် website တည်ထောင်သူမှ သူ၏ site တွင် ထည့်သွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် CPA သည် website တည်ထောင်သူမှ သူ၏စိတ်ကြိုက်ကြော်ငြာရှင်ကို ရွေးချယ်နိုင်သလို ကြော်ငြာရှင်မှလည်း သူ၏စိတ်ကြိုက် website ကိုပြန်လည်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
New Advertiser - Padamyar FM (03/01/2014)
AdInnwa is pleased to announce that our new Advertiser - Padamyar FM (Radio Station) has recently joined to our CPC (Cost Per Click) program as an Advertiser. They are promoting their official website with us.
Myanmar Affiliate, Myanmar CPC, Myanmar PPC, Online Advertising, Myanmar CPA, Myanmar Ads, Ad Innwa, Burmese Burma Advertising, Myanmar Online Marketing Agencies
AdInnwa © 2012-2013 NetScriper Limited. Company number: 06915709. Registered in England & Wales, United Kingdom.